Fetiben'ny Animayo Madrid 2016 | Famoronana an-tserasera
Mercedes Big Real | | Nohavaozina tamin'ny 29/08/2018 12:34 | mpanakanto, Inspiration
Ny zoma 16 sy sabotsy lasa teo, ny 17 desambra, ny Fetibe Iraisam-pirenena XI Animayo nitranga tao Caixa Forum any Madrid. Notazonina tao fiaraha-miasa amin'i Fundació Bancària "la Caixa", ny University Technological of Digital Arts u-tad, ny Ivon-toerana Czech, ny Ivontoerana Slovak ary ny Ivon-toerana Poloney any Madrid. Ny manam-pahaizana amin'ny sarimiaina, ny effets visuels et ny lalao video, ny mpamorona nomerika ary ny sary dia nilaza taminay momba ny zavatra niainan'izy ireo tamin'ny orinasa lehibe.
Nasehon'izy ireo anay ny andiany Master Class notarihin'ireo mpandaha-teny malaza izay nilazan'izy ireo taminay ny zavatra niainany sy ny fahalalàny samihafa izay natao ihany koa sy azo alaina sary, tamin'ny alàlan'ireo singa sy hetaheta samihafa nasehon'izy ireo ary nanoro hevitra anay hanomboka ny asanay eo amin'ny sehatry ny sarimiaina, ny endrika olona, ​​ny fampiasana loko, vokany hita maso, maodely 3D ary tontolon'ny lalao video.
Ny solontena lehibe amin'ity sehatry ny kanto ity dia naneho ampahibemaso ny portfolio-dry zareo ary nanoro anay ny dingana narahin'izy ireo hatramin'ny naha-izy azy ireo traikefa manokana sy matihanina. Manomboka amin'ny tsirony, ny antony manosika ary ny aingam-panahy, hatramin'ny hevitra izay navoak'izy ireo ary nanjary zava-misy tamin'ny androny. Ho fanampin'izay, nampahafantatra anay ny momba ny fironana vaovao ankehitriny.
Ity hetsika ity, ankoatry ny mitranga any Madrid, dia natao ihany koa tany Gran Canaria, Lanzarote, Barcelona, ​​Lisbon, Mumbai ary any Los Angeles. Mpianatra sy antoko liana nanatrika, nandray anjara tamin'ny sehatry ny kanto, tontolon'ny famoronana maroloko, fisavana ary ny vaovao farany sy ny fivoaran'ny sehatra audiovisual.
Nasehon'izy ireo taminay ny loka ho an'ny sarimiaina, ny vokany hita maso sy ny lalao video amin'ity fanontana ity. Nampahafantatra anay ihany koa izy ireo ary nampiditra ny premiere tao Madrid ny sarimihetsika Czech "Tantara Mortal" nataon'i Jan Bubenícek, ary horonantsary Slovak manokana namboarin'ny vehivavy.
Nataon'izy ireo ho azo ampianarina ny efitrano fianarana atrikasa famoronana isan-karazany. Atrikasa, toy ny hetsika famolavolana toetra tarihin'i Borja Montoro, ho fanampin'ny fampisehoana ny poloney Patryk Kyzni miaraka amin'ny fampisehoana mivantana amin'ny endrika famoronana horonantsary vaovao miaraka amina teknika fraktal 3D, ilay atrikasa zbrush mahery omen'ny Raphael Zabala, ny atrikasa robotika ho an'ny ankizy sy ny ray aman-dreny ary nanokana toerana ho an'ny traikefa zava-misy virtoaly ianao, izay ahafahanao mandositra ny tontolo tena izy ary miditra amin'ny tontolo eritreritra vaovao.
Nanomboka teo amin'ny sehatry ny asa izany any Madrid miaraka amin'i Mariano Rueda ao amin'ny Fianarana Manolo Galiana. Mandra-pahatongan'ny fanapaha-keviny hitarika ny asany any Dublin, miaraka amin'ny fianakaviany mba handray anjara amin'ny maha animator amin'ny tapany faharoa amin'ilay horonantsary "Ny alika rehetra dia mankany an-danitra".
Taona vitsivitsy taty aoriana dia nanapa-kevitra ny handeha ho any Los Angeles izy rehefa tonga nokaramain'i Disney. Rehefa afaka taona vitsivitsy, nifindra tany Paris izy ireo, izay niasa ho mpanao sariitatra matihanina amin'ny sarimihetsika toa ny "Hercules" sy "Tarzan" ary eo ambany fitarihan'ny Glen keane miaraka amin'ny sarimihetsika toa "Ny amperora sy ny adala" ary "The jungle book II".
Taorian'ny famaranana ny asany tany Frantsa dia niverina tany an-drenivohitra Espaniola izy hiara-miasa amin'i Sergio Pablos amin'ny fampandrosoana sary ary nanomboka nampifangaro azy tamin'ny asany amin'ny maha mpanao sariitatra an'ny gazety La Razón.
Tao amin'ny MasterClass, nasehony antsika ny azy fizotran'ny asa ao amin'ny Walt Disney Animation, Dreamworks Animation, Paramount Studios, Warner Bros, Blue Sky Studios, Ducan Studio, Illumination Mac Guff. Nolazainy taminay ny momba ny asany amin'ny maha-mpamorona endrika ary toy ny mpanao sariitatra matihanina ao amin'ny "Zootopia", "Rio", "Nocturna", "The Emperor and His Folly", "Tarzan", "Hercules", "Asterix and the Vikings" ary "The Aristocats II". Ho fanampin'izay, nanoro hevitra anay izy ny amin'ny fanomanana portfolio tsara sy ny fomba hisongadinana.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny asan'ny Borja Montoro, azonao atao ny mitsidika ny azy bilaogy eto.
Juan Luis Sánchez, dia manam-pahaizana manokana momba ny vokatra manokana avy any Angletera, izay nipoirany dia Espaniola. Ary koa, amin'ny maha-a mpankafy be of the sarimihetsika mihetsika sy effets manokana, nahatanteraka ny nofinofy hiasa amin'ny sarimihetsika isan-karazany amin'ity karazana ity toy ny andian-tsarimihetsika "Adin-kintana", eo ambany fitarihan'ny talen'ny amerikana George Lucas.
Nilaza izany tamintsika izy Hatramin'ny fahazazako dia nahatsiaro dera be aho ho an'ireo horonantsary ireo ary te hahafanta-javatra hahafantatra ny teknika sy ny fomba fiasa, ny fampiasana ireo loharano sy fitaovana isan-karazany, hahatratrarana vokatra manokana miavaka. Niasa tamin'ny sarimihetsika ihany koa izy "Gravity" anisan'ny ekipa mpamorona, miasa amin'ny fitafian'ilay mahery fo Sandra Bullock, akanjo roa NASA ary palitao Rosiana iray ary ampivoaro azy ireo nomerika, miampy ny tena izy ireo.
Nanomboka naka sitraka amin'ity sehatra ity, satria amin'ny sarimihetsika tianao indrindra "Adin-kintana" e "Indiana Jones", misy sary mahatalanjona tokoa, izay nanome azy antony ampy hanentanana ny tenany sy hanombohany ny tenany hanomboka amin'ity sehatra mampiavaka azy ity. Variana loatra tamin'ny fahalalana sy fikarohana izy ny fomba fampivelarana ireo sary nandrafitra ilay horonantsary, nanintona ny sainy tamin'ny fomba famoronana tantara sy tontolo mamorona sy an-tsaina.
Nilaza izany tamintsika izy misaotra boky nomen'izy ireo momba ny effets spécial izy ireo, nanampy azy hahalala ny sasany amin'ireo mety ho fomba fiasa amin'ny effets visuels, ankoatry ny fahafahany manao asa matihanina sy nanome azy fahalalana hianaranao bebe kokoa momba ny fialambolinao.
Nanazava taminay koa i Sánchez izay tokony hatomboka amin'ity sehatry ny kanto ity Tsy mora izany, noho avy amin'ny sehatry ny siansa sy teknika izy, noho izany dia tsy dia mahazatra loatra ny mahita olona manana fiofanana ity. Mihevitra ny tenany ho olona manana toe-tsaina teknika sy famoronana izy. Fa amin'ny farany nahavita nanao ny fialamboliny ho lasa asa.
Con Sarimihetsika Jurassic Park, dia nianatra Fizika, izay, nahita ny vokany manokana no nahatonga ny hanandrana ary hiditra ao ambadika amin'ity sehatry ny kanto ity izay manaitra tokoa. Rehefa nahavita ny fiofanana ara-tsiansa sy ny mari-pahaizana Master momba ny siansa informatika izy dia nety ho nanao risika ary nokaramaina tany Los Angeles tamin'ny fianarana "Rhythm and Hues" miasa amin'ny vokatra manokana, ka nanomboka ny asany.
Rehefa avy nandany taona vitsivitsy tany Los Angeles dia nanana fotoana nananana izy miasa ao amin'ny Industrial Light and Magic (ILM) any San Francisco, toerana nitondran'izy ireo tetik'asa toa ny "Adin-kintana", izay ahafahany manatanteraka ny nofiny. Ary miasa koa aho "Fanafihana ny klona" y "Valifaty amin'ny Sith" eo ambany fitarihan'i George Lucas.
Rehefa niasa tamin'ny sarimihetsika izy "Gravity" eo ambany fitarihan'ny Alfonso CuarónTetikasa tena fatra-paniry laza io. Asa be dia be no namorona ny akanjo, zavatra izay tsy dia voamariky, dia saika tsy hita maso ary tena be pitsiny, satria toa misy izy ireo. Nanokana ny tenany izy hanahaka ireo fitoriana. Nolazainy taminay fa tsy fantany ny fahombiazan'ny sarimihetsika iray manontolo, raha ny filazany, tsy fantatrao mihitsy raha hahomby ny sarimihetsika iray, raha fantatra izany dia ho mora kokoa izany. Tsy nampoizina ny fahombiazany, nanohy nandresy izy tany amin'ny Hollywood Oscars.
Juan Luis Sánchez dia niasa tao amin'ny Framestore, Double Negative, ILM, Illion Studios. Ao amin'ny sarimihetsika "Paddington", "The Dark Knight", "Harry Potter ary ny Chambre Secrets", "Harry Potter and the Order of the Phoenix", "Pirates of the Caribbean" ary "Babe, ilay kisoa be herim-po".
Tao amin'ny MasterClass azy dia nilaza izany tamintsika izy miasa ao Rovio. Rovio Entertainment Ltd., dia orinasa miandraikitra dfampivoarana ny lalao video Finnish monina any Keilaniemi, Espoo, Failandy. Rehefa natsangana dia nantsoina hoe Relude izy io, tamin'ny 2005 dia nanavao ny anarana izy ireo ary novaina ho Rovio. Ity orinasa ity dia eken'ny lalao video Angry Birds.
Su filan'ny Disney ary ny tantara tao amin'ny sarimihetsika dia nahatonga azy hanana fialam-boly sy fahalianany amin'ity sehatra ity. amin'ny Fetibe Animayo, nizara ny zavatra niainany, nanoro hevitra anay ary nilaza taminay momba ny fizotry ny famoronana. Ankoatr'izay dia nilaza taminay izy fa ny hany fomba henoina dia ny mitantara tantara. Nolazainy taminay ny momba ny tantara sy ny lanjan'izany. Nilaza taminay izy fa mba hohenoina, mila mitantara tantara tsara ianao, ka hoy izy taminay "Ao amin'ny ADNko ny fitantarana."
Nilaza taminay koa izy fa tsy maintsy tsy mianatra. Raha ny filazany dia ilaina ny tsy mahomby satria "Ny" selfie "vita tsara dia tonga taorian'ny tsy fahombiazana be". Nolazainy taminay fa ny lesoka dia mahatonga anao hiasa mafy kokoa ary amin'ity fomba ity, afaka ny ho matihanina tsara ianao amin'ny vokatra tsara.
Mandritra ny dingan'ny famoronana dia manoro hevitra antsika izy mba hiala sy hikaroka fomba fijery hafa. Nanoro hevitra antsika izy, milalao amin'ny fahatsapana dimy ary fikarohana momba ny lohahevitra samihafa ary izay ilaina amin'ny fizotran'ny famoronana.
Ny sasany amin'ireto fananana sy toro-hevitra nolazainy ireto dia mahomby ary fanalahidin'ny fandresen'ireo Angry Birds, ho fanampin'izay nifandray tamin'ny vahoaka ny tantarany. Maneho hevitra aho fa "Amin'ny lalao video, zava-dehibe ny tantara."
Ity lalao video ity, Mampiavaka azy satria tsotra, misy tantara tsotra sy mahafinaritraAnkoatra ny lalao mampiankin-doha, miaraka amina endrika mahaliana, miaraka amina endri-tsoratra mahafinaritra, dia mety hampiala voly izany ary hifanaraka amin'ny karazana mpihaino amin'ny taona rehetra. Noho ireo antony ireo dia lalao video mahafinaritra ny Angry Birds ary ny fahombiazany dia nekena tany amin'ny firenena dimampolo mahery. Saingy ny fitantarana tantara dia tsy ilaina raha te hanana lalao mahomby, miankina amin'ny anton-javatra hafa ihany koa izany, toy ny fananana hafa ao anatiny.
Alvarado dia niasa tao amin'ny Rovio Entertainment LTD., Miaraka amin'ny lalao toy ny Angry Birds, Jolly Jam, Bad Piggies, Amazing Alex, The Croods ary Love Rocks.
Zabala, dia a mpanakanto nentin-drazana sy niomerika. Nanomboka tamin'ny naha-mpanao sary sokitra azy izy ary nifindra tamin'ny maodely 3D tamin'ny famokarana lehibe. Niasa tamin'ny orinasa toa azy izy The Mill na Weta Digital. Rafael Zabala ny asany matihanina amin'ny maha mpanakanto nentim-paharazana, toa mpanao sary sokitra nanomboka tany Londres amin'ny tontolon'ny zavakanto, amin'ny atrikasa. Avy amin'ny fahaizanao zavakanto nahita ny fahaizany niomerika ary nanomboka niditra tamin'ny tontolon'ny Modely 3d.
Ao amin'ny MasterClass anao, nanamarika ny maha-zava-dehibe ny fananana fototra tsara ary ny maha-zava-dehibe ny fananana fampahalalana tsara. Ho fanampin'izay, hamafisiko fa tsy maintsy mihaona amin'ny olona ianao ary mianatra mihetsika, mihavana. Diniho fa zava-dehibe ny fiaraha-miasa.
Nanao ny portfolio-ny izy ary manandrana mihaona amin'ny olona mitady fotoana iray aho. Fahafahana azony tao amin'ny The Mill. Avy eo manohy ny Weta Digital aho, izay andraisako anjara amin'ny sarimihetsika "Planet an'ny rajako", izay nahazoany tarehimarika tena zava-misy. Miasa amin'ny sehatra samihafa toy ny sinema, lalao video, dokam-barotra sns. Nilaza izany tamintsika izy anatomy dia sarotra nefa tena ilaina ary ny maha-zava-dehibe ny pitsopitsony. Ny iray amin'ireo torohevitra nomeny dia ny fahitana ny zava-misy amin'ny fomba hafa, ny fahitana ny zava-misy amin'ny solosaina amin'ny endrika nomerika, fomba fijery hafa ny fahitana azy amin'ny fomba ara-batana sy tena izy.
Ity mpanakanto nentim-paharazana sy nomerika ity dia niasa tamin'ny fikosoham-bary, weta digital, ary psyop. Izaho koa dia miasa amin'ny "League of Legends", "The Hobbit", "Dawn of the Planet of the Apes", "Iron Man 3", "Man of Steel" ary "Clash of Clans".
Ho fanampin'izay, nikarakara ny hetsika ihany koa izy "Vato sy Pixel", izay manangona vaovao ho an'ny zandriny indrindra amin'ny zavakanto nentim-paharazana sy ny zavakanto nomerika, izay hatao any Serra, Valencia, ny 17 sy 18 jona 2017. Raha liana amin'ny kanto nentim-paharazana sy nomerika ianao dia mamporisika anao hanatrika sy hianatra ny zavatra rehetra maniry momba ny kanto ankehitriny indrindra, amin'ny fomba fijery klasika kokoa.
Afaka mahafantatra bebe kokoa momba an'ity hetsika ity ianao eto.
Amanita Design, dia orinasa iray tsy miankina any Eropa, izay natokana ho an'ny fampivoarana ny lalao video. Any amin'ny Repoblika Tseky no misy azy, fantatra fa iray amin'ireo zava-dehibe indrindra any Eropa nataon'i Jakub Dvorský.
Jaromír Plachý dia mpanentana sy mpamorona sary izay niara-niasa tao amin'ny studio Amanita Design. Nandray anjara tamin'ny lalao video toa ny "Machinarium" sy "Botanicula"Izy koa dia nanao ny asa amin'ny maha-mpialamboly amin'ny fety maro.
Heveriko fa ny tantarao sary, efa voatendry Zlatá Stuha loka 2016. Noho ny lalao video Botanicula, nahazo loka marobe izy, anisan'izany ny Lalao eoropeanina tsara indrindra tamin'ny 2012. Tamin'ny Anifest 2008, nahavita izany izy ny loka tsara indrindra amin'ny Animation Internet, Ankoatra ny Loka ho an'ny mpijery ho an'ny asany any Hrouda / The Clod.
Ho fanampin'izay, nohazavainy daholo ny Drafitra famoronana Botanicula ary nanoro hevitra anay ary nanazava taminay ny zavatra mora indrindra tokony hatao amin'ny lalao video sy izay nanana ny sarotra indrindra. Ho fanampin'izay dia nohazavainy koa ny dingana famoronana ilay lalao video "Chuchel". Lohateny vaovao novokarin'ny studio Amanita Design. Lalao iray karazana "Point'n'click" Miaraka amin'ny sarimiaina mahafinaritra isan-karazany, ao amin'ny Chuchel, ilay mpiaro azy sy ny namany, Kekel dia manomboka andiana iraka feno traikefa nahafinaritra. Amin'ity lalao video ity dia miasa avokoa ny ekipa 'Botanicula'.
Plachý, miasa amin'ny fampandrosoana ny Videogames toy ny "Samorost 3", "Samorost 2", "Samorost", "Botanícula", "Machinarium", "Rocketman" ary "Questionaut".
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'i Jaromír Plachý ianao dia afaka mitsidika sy manadihady ny portfolio-ny eto.
José Antonio Rodríguez, dia talen'ny ivon-tsarimihetsika U-tad. Niasa tamin'ny famokarana sarimihetsika Planet 51 any Ilion, izay nandresy Goya tamin'ny 2009 ho an'ny sarimihetsika mihetsika tsara indrindra. Nanoro hevitra anay izy momba ny sarimiaina ary nasehony anay ny fizotry ny famoronana manontolo, ary koa ny fanazavany ny fomba namolavolana ilay sarimihetsika. Raha ny marina mampianatra kilasy ao amin'ny Master in 3D Animation ny endri-tsoratra U-tad.
Izy no talen'ny akademika momba ny kanto, ny endrika kanto ary ny sarimiaina ao amin'ny U-Tad Digital Arts University of Technology. Manokana amin'ny famokarana sy ny fitarihana tari-dalana. "Taloha ... tantara nifamadika", "Mortadelo sy Filemón nanohitra an'i Jimmy el Cachondo", "Defender 5", "Happinly Never After", "Planet 51".
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny University Technological of Digital Arts U-Tad ianao dia afaka manindry eto.
Edgar Martín Blas, dia mpisava lalana ny zava-misy virtoaly. Niasa ho talen'ny famoronana ho an'ny dokambarotra nomerika sy orinasa mpamorona toa an'i Tuenti izy. New Horizons VR naorina ary amin'izao fotoana izao dia manohy miasa ao amin'ity orinasa ity, manatanteraka tetikasa lehibe ho an'ny marika lehibe.
Ny zava-misy virtoaly dia a tontolo manodidina ny filaharana na singa tena izy, izay nitondra ny vokatry ny fiampitana teo amin'ny tontolo foronina sy tena izy. Tontolo iray izay tsikelikely no manodidina sy mandresy amin'ny fandrosoana vaovao izay manolotra ny mpanjifa hanana fahatsapana sy fihetsem-po ary hampanakaiky azy ireo ny zava-misy. Ny zava-misy virtoaly dia tsy mitovy amin'ny fantsona hafa, satria ny mpijery mandosira ary esory ny zava-misy hiditra amin'ny tontolo nofinofy.
Amin'izao fotoana izao VR dia mampiasa vola amin'ny sehatry ny famolavolana, indrindra amin'ny fanentanana dokam-barotra misy marika lehibe, handraketana sehatra samihafa. Ary fantatray ny fototra iray, izay nivoatra tsikelikely. Martín Blas, miasa amin'ny tetik'asa marketing ho an'ny marika toa an'i Disney, Tuenti, Ferrari, Movistar, Iberdrola, Antena 3.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny VR ianao dia afaka mitsidika sy manadihady bebe kokoa eto.
Miaraka amin'i Patrik Kizny Poloney, Ny mpanatrika dia nianatra momba ny fironana horonantsary vaovao amin'ny fampiasana teknika fraktal 3D. Ny teknikan'ny vaky efa antitra be ioNa izany aza, androany dia rehefa nanjary singa mifandraika amin'ny famoronana horonantsary 3D. Ampiasao algorithma miloko, piksel ary gradient izay mamela ny fraktal tsirairay hampiasa malalaka, mamela ny famoronana tetikasa misy fananana tsy manam-petra. Teknika notontosaina tamin'ny alàlan'ny solosaina izy io, izay mila fotony sy fahalalana momba ny fitambaran'ny loko sy ny endrika, ary koa ny fahalalana ny logaritma sy ny fitoviana fraktal.
Izy dia talen'ny fakana sary miavaka amin'ny teknika fanandramana, ary koa manam-pahaizana amin'ny scanning laser, photometry ho an'ny VFX sy 3D fraktal ho an'ny VFX.
Raha te-hitsidika ny pejy Animayo ianao dia kitiho eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Animayo Festival 2016